Bhiridha akany’udzwa ne’flambo’ | Kwayedza
Bhiridha akany’udzwa ne’flambo’
14 May, 2022 - 09:05 2022-05-13T17:16:42+00:00 2022-05-14T09:30:12+00:00 0 Views
MURUME anova bhiridha, uyo anonzi akatsvaga matsotsi ekuti vabe US$100 000 pachechi inonamatira machawa (mosque) muguta reHarare apo aishandira, akazoirasa sezvo akabatikidzwa mushure mekutanga kurarama kaupenyu keshoroma kuburikidza nekutenga motokari mbiri achishandisa mari yekuba iyi.
Alexio Rwizi (35) anonzi akaruka zano rekuba nemurindi wepachechi apa, Lloyd Mutusva uye ndokushevedza Munyaradzi Matenhese kuti auye nechikwata chake chematsotsi kuzoba panzvimbo iyi.
Vatatu vose ava vakasungwa nekuda kwemhosva iyi.
Rwizi, Mutusva naMatenhese vakamiswa mudare reHarare Magistrate Court pamberi pemutongi Mai Yeukai Dzuda vachitarisana nemhosva yekuba nemusi weMuvhuro uno.
Havana kupihwa mukana wekubvuma kana kuramba mhosva iyi.
Nyaya yavo iri kuenderera mberi nekutongwa apo vanenge vari mutirongo.
Muchuchisi Anesu Chirenje vanoti munaKurume gore rino, Rwizi akaenda kuna Mutusva ndokumuudza kuti pane mari yaive muchechi umu iyo vaigona kuba.
Vanonzi vakazoshevedza Mutenhese kuti auye nechikwata chake chematsotsi kuitira kuti zviratidzike sekunge mari iyi yabiwa nembavha dzakabva kunze.
Mutenhese anonzi akauya nevamwe varume vatatu, avo vasati vabatwa nemapurisa, ndokuenda kumosque iyi nemusi wa28 Kurume.
Vanonzi vakawana Joram Mazungunye achichengetedza panzvimbo iyi.
Vakamusunga netambo dzeshangu ndokuzopinda mumosque umo vakaba US$100 000 muhofisi yadirector.
Mushure mekuba mari iyi, Rwizi anonzi akashandisa US$8 500 kutenga motokari yemhando yeMazda Bongo neHonda Fit inokosha US$5 600 sezvo akange ave kurarama upenyu hweshoroma.
Rwizi akazosungwa nemusi wa7 Chivabvu.
Kunze kwekupomerwa kuba, Rwizi akatarisana zvakare nemhosva yekufambisa mari yakawanda nenzira ine chikiribidi (money laundering).
Musungwa azviuraya mujeri13 May, 2022
Zvigure zvotongerwa kufushira munhu ari ...13 May, 2022